Otu esi etinye Memcached na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
September 18, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ – Kwe ka Memcached Iwu UFW
Nginx HTTP sava
Wụnye ọba akwụkwọ ndị ọzọ
Na njedebe nke ntuziaka, ị ga-ama otu esi etinye na hazie Memcached na Debian 11 Bullseye gị sistemụ nrụọrụ.
Site na ndabara, Debian 11 enwetala Memcached na ebe nchekwa ya. Iji tinye Memcached, tinye iwu a:
Rịba ama, nhọrọ nrụnye nke abụọ, "libmemcached-ngwaọrụ” ngwugwu, na-enye ndị ọzọ iwu iji weta mmezi mmekọrịta na mebie ikike na Memcached.
Na-esote, gosi na etinyere Memcached nke ọma site na iji nyocha iwu amụma apt-cache:
Ọ bụrụ na arụghị ọrụ a, malite Memcached site na iji iwu a:
Memcached ga-abụrịrị na-ege ntị 127.0.0.1. Ọzọ, mepee ntọala ndabara na faịlụ nhazi dị na "/etc/memcached.conf".
Ugbu a gbadaa ala wee chọta ahịrị ndị a wee lelee ya "-l" paramita dị. Hapụ dị ka ndabara ọ gwụla ma ị nwere IP dị n'ime na netwọk mpaghara ma ọ bụ IP mpụga site n'èzí; ị ga-agbanwe adreesị IP ndabara site na 127.0.0.1 gaa na adreesị IP ọhụrụ.
A na-atụ aro ka ị gbanyụọ UDP. Ọ gwụla ma ịchọrọ ka agbanyere ọrụ a, gbakwunye ahịrị na-esote iji gbanyụọ ya.
Tupu ịmechaa, a na-atụ aro ka ị gbanwee ebe nchekwa 64MB ndabara n'ihi na nke a abụghị nke ukwuu maka weebụsaịtị buru ibu, ị gaghị ahụkwa nnukwu uru site na iji Memcached.
Ịkwesịrị ịtọ nke a ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya maka ihe nkesa gị. Ọ bụrụ na ị nwere 3 ruo 6 GB nke RAM a na-ejikarị eme ihe, tinye ya na 1GB ma ọ bụ 2GB. Nke a bụ ntọala ị ga-ekpebi nke ga-akacha mma maka ihe nkesa gị. Ihe nkesa nke ntuziaka na-agba na 8GB, yabụ anyị meziri cache anyị ka ọ bụrụ 2GB dịka ọmụmaatụ naanị.
Ọ bụrụ na etinyere UFW, ịkwesịrị ịmepụta iwu ikike UFW na iwu TCP ọdụ ụgbọ mmiri 11211. Dabere na nrụnye na ihe achọrọ ma ọ bụrụ na ị na-eji otu netwọkụ ma ọ bụ na netwọkụ ụyọkọ, ọmụmaatụ ụfọdụ dị n'okpuru:
Otu ihe atụ njikọ netwọk IP:
Njikọ netwọkụ ụyọkọ IP nwere ọtụtụ ihe atụ:
Memcached na-abịa na ndọtị dị iche iche maka asụsụ mmemme, mana a na-eji ya maka PHP. Iji wụnye ọbá akwụkwọ PHP tinye ihe ndị a.
Ndị ọrụ Apache nwere ike mebe koodu ndị a iji mee Memcached na sistemụ ha.
A ga-eme Memcached maka Nginx na ngọngọ PHP gị ozugbo etinyere ya.
Ị nwere ike iwunye Python na ma ọ bụ nkwado Perl site na ime iwu ndị a.
Nkuzi ahụ egosila gị otu esi etinye Memcached na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị, na-etinye ọba akwụkwọ ndị ọzọ yana otu esi enweta ndepụta iwu ọnụ.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Debara aha Mail igodo
Otu esi etinye Brave Browser na Linux Mint 20